Kungani kufanelekile ukuthenga ikhofi ephilayo? - iSearch
Qala ikhemisi injabulo Kungani kufanelekile ukuthenga ikhofi ephilayo?
AmaJalimane amaningi aphuza izinkomishi eziningana zekhofi usuku lonke: isiphuzo esishisayo singesinye seziphuzo ezidumile kakhulu ngenxa yokunambitheka kwayo okuyingqayizivele. Kodwa-ke, bambalwa abantu abazibuza ukuthi ibhontshisi yekhofi ivelaphi - futhi okuningi kungatholakala ngokuthengwa kwekhofi ephilayo kunalokho okuvame ukucatshangwa.
Kungani kufanele ikhokhwe ikhofi ehlelekile?
Izizathu zokuthenga ikhofi ezihlelekile zombili zihlukahlukene futhi ziningi. Yikuphi cishe ukhuluma kubathengi kakhulu ukuthi ikhofi, isizinda ekukhiqizweni noma ukutshala: Ukutshala ikhofi organic ikhokhelwe wezohwebo izimo kungenzeka futhi kuyasebenza kangcono abasebenzi. Ngakho-ke, ukukhiqizwa kufanele kube nokusimamisa ngokomthetho ngangokunokwenzeka futhi kulungele futhi kwenziwe ngokwengeziwe komphakathi kunokuba ikhofi evamile.
Akukhona kuphela ekuthengiseni nasekuhwebeni, kodwa nasekuhlaleni ubhontshisi wekhofi ekuhlaleni okunomvelo, okutshalayo okusimeme kuhlonishwa. Ngakho, ubhontshisi kuthiwa ngaphansi ehlaselwe ezingcolisayo, okwenza ikhofi enempilo, hhayi nje kuphela, kodwa futhi ngcono ukunambitheka. ikhofi Organic okungukuthi hhayi esekhulile okuthiwa monoculture, lapho izakhi enhlabathini zisuswe ngoba ukuvuselelwa ngaphandle isikhathi kanye inzuzo kakhulu abalethe luyingxenye kwezomnotho - ukutshala ikhofi organic ikakhulukazi kwenziwa okuthiwa emasimini okuxubile, lapho de zekhofi, isibonelo, ngaphezu Izitshalo ze-avovocado noma zebhanana zitshalwe. Kudingeka umanyolo ongaphansi kakhulu kanye nokulawulwa kwezinambuzane eziphansi kakhulu. Ngesikhathi sokuvuna, esikhundleni semishini emikhulu, abasebenzi baqashwa ukuvuna ubhontshisi ngesandla.
Ukuhlukana kwamanani kanye namanani kuya kwekhofi evamile
Kukhona umehluko omkhulu phakathi kwekhofi evamile kanye nekhofi ephilayo - okuhlabayo kakhulu kunambitha kanye nentengo. Ngaphezu kwakho konke, abathengi abaningi abangase bakwazi ukuvimbela umthamo wemali ngoba bahlobanisa ngephutha imikhiqizo ye-organic ngamanani athengisiwe. Lapha, ikhofi izindleko isihlungi eyaziwa ikhofi Brands ukuthi awuzange organically esekhulile futhi angabacwasi adayiswa mayelana 15 EUR kilogram per. Ikhofi ye-organic ifika cishe nge-18 EUR nge kilogram. ngakho umehluko intengo akuyona makhulu njengoba ngokuvamile kucatshangwa - kodwa amanani ngabanye inkambo kuncike brand, ubuningi bese uthayipha Ukuqhathanisa uyafaneleka, ngoba ikhofi organic iyamangalisa, ngokungagcini nje ngokubashumayeza izinzuzo zokuziphatha okhulayo nokuthengisa, kodwa futhi ukunambitha. ngenxa ongaphakeme ekushayweni ukulima kukhona zekhofi ezivela emithonjeni esimeme kakhulu kakhulu enamakha egcwele ukunambitheka.
Ungabona kanjani ikhofi ephilayo?
Ikhofi ye-organic manje inikezwa ngaphezu kwemikhiqizo evamile ezinkingeni eziningi. Ungakwazi ubheke lwezimpawu organic: unjalo ikhofi, esibonakala isibonelo nge ilebula organic yaseYurophu, ehlanganisa i ngaphandle genetic engineering kanye ngaphandle kokusebenzisa izibulala-zinambuzane ezinamakhemikhali ikhulile. I olunezinhlangothi uphawu organic ukuze uqiniseke ukuthi okungenani 95% we ikhofi equkethwe isihloko EC Eco-Regulation futhi organically esekhulile. Uma ikhofi ibhalwe uphawu lokuhweba ngokulinganayo, kuqinisekiswa ukuthi abalimi bekhofi bayothola inkokhelo enhle futhi enengqondo.
Ikhofi ye-organic iyasiza - hhayi kuphela ngokulima, ukulima, kepha futhi ngokusebenzisa ukunambitheka okumsulwa. Ngokuqhathaniswa ikhofi yendabuko, isilinganiso intengo-ukusebenza kungcono kakhulu - futhi wonge ukuze abathengi hhayi kuphela imvelo futhi ukusekela izimo zokusebenza kangcono abasebenzi kanye abalimi, kodwa futhi ikhofi eliphezulu ngaphandle ukungcola ungakwazi ukujabulela.
Isihloko sangaphambiliniI-Sango sea coral
Isihloko esilandelayouwoyela linseed